पहिलो पटक यहाँ युवतीले पनि मदिरा किन्न पाउँछन्
HOME » पहिलो पटक यहाँ युवतीले पनि मदिरा किन्न पाउँछन्
डिसी नेपाल , २७ पौष २०७४
बीबीसी। श्रीलंकामा अब महिलाले पनि मदिरा किन्न पाउने भएका छन्। ६० वर्षपछि पहिलो पटक महिलाले मदिरा किन्न पाउने भएका हुन्। तर मदिरा किन्ने महिलाको उमेर भने १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। सरकारले १९५५ को एक कानुनलाई परिवर्तन गरेको छ। र भनेको छ, ‘यो कानुनले महिलामाथि भेदभाव गरेको थियो।’
बुधबार श्रीलंकाका अर्थमन्त्री मंगला समरवीराले कानुनमा परिवर्तन गरिएको घोषणा गरेका हुन्। यसअर्थ अब महिलाले ती क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउँछन् जहाँ मदिराको कारोवार हुन्छ।
यद्यपी श्रीलंकामा पुरानो कानुनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिएको थिएन। तर महिलाले कानुन परिवर्तनको स्वागत गरेका छन्।
सामाजिक संजालमा महिलाहरुले पुरानो कानुन परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। नयाँ कानुन अनुसार महिलाले अब रेस्टुरेण्ट र बारमा काम गर्न वा मदिरा सेवन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छैन।
धेरैजसो मानिसले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। तर कतिपयले भने कानुन परिवर्तनसँगै महिला मदिराको तलको सिकार हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। श्रीलंकामा महिला सांस्कृतिक कारणले गर्दा पारम्परिक रुपमा मदिरा सेवन गर्न पाउँदैनन्।
७ बर्षकी बालिकाको बलात्कार पछि हत्या गरेका इमरानलाई फाँसीमा झुन्ड्याइयो
दशैमा कालीप्रसाद बाँस्कोटाले ल्याए देशै रुवाउने गीत (भिडियो)
जापानमा शरणार्थी आवेदन दिने विदेशीमा सबैभन्दा अगाडि नेपाली
विश्वभर चलेन युट्युब, ट्वीटरमा हल्लाखोर
अनौठो प्रचल यहाँ जता पनि पुरुषको लिंगमात्र देखिन्छ (फोटोफिचर)
दशैंमा लगाउने जमराको जूसले स्वास्थ्यलाई गर्छ यस्तो फाईदा
विश्कै सुन्दर यूवतीका हट एण्ड सेक्सी तस्वीर (फोटोफिचर)
आफ्नै प्रेमिकाको मुटुको सेकुवा बनाएर रक्सीसँग खाए
प्लास्टिकको बोतलमा पानी पिउँदा क्यान्सरको खतरा
श्रीमती साथमा हुँदा पनि हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? हो यस्तो छ कारण
ग्यास सिलिण्डर विष्फोट, १ जनाको मृत्यु, २ घाइते
पोग्बालार्इ बार्सिालाेना भित्र्याउने मेस्सीकाे चाहना
दशैंकै दिन यी वृद्धाको निर्मम हत्या
गुप्टिलले पाकिस्तानविरुद्धको सिरिज गुमाउने
मानिस र कुकुरबीच कति पुरानो सम्बन्ध ?
पिएसजी र बेलग्रेडका समर्थकमाथि युईएफले अनुसन्धान गर्ने